Kubekho inkqubela kunye akukho uchazo: Ekubeni yesibini umntwana kwi-China - CNN
Kubekho inkqubela kunye akukho uchazo: Ekubeni yesibini umntwana kwi-China – CNN
Okanye waye yena ukukelela subsidized lezempilo ukuba uninzi isixeko abahlali basefama uyakuthanda. Yena kusetyenziswa umama ke kwaye udade u-uchazo amakhadi ukuthenga amayeza xa yena wehla ill. ‘Yena agcina ecela kum kutheni yena akasoze ndiye esikolweni, kutheni yena akasoze nangona bonke abanye besenza, kwaye ndino akukho unye njani ukuphendula yakhe ngaphandle kokuba repeating ukuba yena yi yesibini umntwana, umama Bai Exiling, owayesakuba ifektri lwabasebenzi basefama, wathi, CNN ukusuka yakhe modest wazala-yezitena ekhaya.
Nangona imingcipheko, yena waya ozayo nge pregnancy. A lwabantwana abancinane bout ka-polio yonakele yakhe leg kwaye wandibulela ukuba ingaba omnye umntwana ukuba zikhathalele yakhe kwi old age. China ke usapho ucwangciso imithetho kufuna iintsapho ezininzi eziphilayo basezidolophini ukuba ingaba omnye umntwana. Lo mgaqo-nkqubo ngu looser kwiindawo ezisemaphandleni kwaye unako kanjalo kuba skirted ngabo ukuwahlawulela ukuba ahlawule iliso-watering fines. Kodwa Li ke, abazali ayikwazanga ahlawule, yuan (dollazi) esangezelelweyo nabasemagunyeni saliwe Li kwayo indlu ubhaliso amaxwebhu, okanye ‘hukou,’ nto leyo entitle isixeko abahlali ukuba subsidized impilo, izindlu kunye nemfundo. Enye-umntwana mgaqo-nkqubo, nangona applauded yi-ezininzi kuba slowing phantsi China ke bonke ukukhula, wenziwe widely criticized kuba ezibangela ukuba Kwezinye oko kuthetha umthetho hurts China ke, abantu abadala, abo ngokuqhelekileyo rely kwi-abantwana babo kuba inkxaso kwi old age, kwaye nkqu constrains kuhlumo loqoqosho njengoko esenza ubudala bonke uqalisa landula, China ke urhulumente iindaba i-arhente, wathi China waba deliberating relaxing umgaqo-nkqubo ukuvumela couples, apho omnye umzali ngumzekelo kuphela umntwana, kuba abantwana ababini. Okwangoku, bobabini abazali kufuneka sole abantwana kuba eligible for a yesibini umntwana. ‘Sikulungele optimistic ukuba i end kwenye-umntwana mgaqo-nkqubo uza kamsinya kuba iqinisekiswa,’ economists Ting Lu wabhala kwi-i-agasti ingxelo-mali indlu Bank of America Merrill Lynch. Bathi ukuba komhlaba we-ezintathu – decade endala-nkqubo ayikwazi kunokwenzeka emva iqhosha zine -umhla zokuhlanganisa China ke phezulu iinkokeli i-Communist Iqela ke wesithathu plenum apho waqalisa kwi mgqibelo. Wakhe usapho kuba campaigned relentlessly kuba wakhe ukuba ube ‘hukou’ amaxwebhu abo bakholelwa yena banelungelo lokufumana ukuze aphile eqhelekileyo ebomini. Baya kuba petitioned lwengingqi kwaye wesizwe amagunya kwaye ingaba umleqa zabo kunjalo, ngokusebenzisa inkqubo esemthethweni, kodwa, ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, akukho avail.
‘Li Xu ke ubawo kunye nam baba beaten brutally
Ndandingasakwazi get ngaphandle umandlalo kuba phantse zimbini zidlulileyo, udade wathi zikhathalele kum, wathi Bai. Ngoseptemba, usapho wafumana isaziso ukuba zabo meko ingaba kuviwa ngo – Beirut Phezulu Abantu ke, Inkundla, kodwa abakho optimistic ukuba kunjalo, uya kuba kugqitywe zabo ukuthandwa. A esilibambela kuba inkundla waxelela CNN ukuba kunjalo ngoku ekubeni examined kwaye i-ukubhengezwa iya kwenziwa ngethuba elifanelekileyo kunjalo. Kwakukho isibini kunokwenzeka iziphumo noba kunjalo izakuba retried, okanye yoqobo verdict affirmed, esilibambela wathi. ‘Kuphela nto sifuna ufumana i-inkcazo kutheni bethu intombi sele akukho ‘hukou’, kwaye akukho ngakumbi, wathi Li ke ubawo, Li Hongwu. Kwi, Li waqala a microblog kwi Weibo, China ke no ka-Itwitter. Yena hopes yakhe kwi-intanethi ubuso kuya kusinceda zoba ingqalelo kuye plight, kwaye yena ufuna ukusebenzisa iqonga wokwenza ngaphezulu dibanisa tshintsha kuba abantu yayo indawo. ‘Ndiya kwenza ukuba bonwabele studying umthetho kwaye ithemba ndinga sebenzisa le ukunceda abanye abantu, kodwa akunjalo ngoku, ndine ukuba abe isebenziseke kwaye ukusombulula wam uninzi urgent ingxaki wokuba a isemthethweni yesibini umntwana, watsho. ‘Ngamanye amaxesha mna ukuthandabuza nokuba yintoni ndenze intando tshintsha nantoni na, kodwa ndicinga ukuba uzaku ukuzithwala kwi,’ watsho, echoing igama wakhe hetalia Abancinane Xu zange kuncama